Ugcino lweGalaxy Note 9 luya kuza nemali yokuyisebenzisa kwi-Fortnite | I-Androidsis
Kwezi veki kuye kwavakaliswa ukuba iiMidlalo ye-Epic kunye ne-Samsung besivalile isivumelwano esiza kunika lukhulu ekuzakuthethwa ngaso. Njengoko I-Fortnite iza kuza kwi-Android njengomdlalo okhethekileyo okwethutyana kwiGlass Qaphela 9. Eli rumor alikaqinisekiswa okwangoku, njengoko kungekho nkampani ithethileyo. Kodwa, kubonakala ngathi ekugqibeleni kuya kuba ngoluhlobo.
Kuba iphepha leMidlalo ye-Epic ikwazile ukubona ikhowudi yewebhu, ekubonakala ngathi iyakuqinisekisa oku. Lo nto kwindawo yokugcina yeGalaxy Note 9, abasebenzisi baya kuba nakho ukufumana imali yokuchitha kwi-Fortnite. Indlela yokukhuthaza zombini ezi mveliso.
Kusekho amathandabuzo amaninzi malunga nokuba le ntsebenziswano iya kuhlala ixesha elingakanani. Kuba kukho imithombo yeendaba ekhomba kwiinyanga ezine, enokuthi ichithe ixesha elininzi, kwaye inokubangela abanye abasebenzisi be-Android baphulukane nomdla kumdlalo. Ngelixa abanye besithi iintsuku ezingama-30.
Asazi nto ikhonkrithi. Into eyaziwayo kukuba abasebenzisi aba-odola kwangaphambili i-Galaxy Note 9 bazakufumana imali yokuchitha kwi-Fortnite. Ngokukodwa, Baya kufumana i-V-Bucks exabisa i-150 yeedola othenga ngayo izinto kumdlalo. Ingangama-15.000 ewonke kumdlalo weemali.
Akuthandabuzeki yindlela elungileyo yokukhuthaza abasebenzisi ukuba badlale kwaye bachithe in Fortnite. Siza kubona ukuba oku kunempembelelo kwinani lokugqibela lokugcina i-Galaxy Note 9. Kodwa uluvo lwazo zombini iinkampani lucacile, zama ukuvelisa olona qeqesho kwiimveliso zazo kwaye uzenze zibe nomtsalane.
Kwiintsuku ezintlanu i-Galaxy Note 9 ihanjiswa ngokusemthethweni, Ezineemfihlo ezimbalwa kuthi ngoku. Emva koko sinokwazi ngokuthe ngqo ukuba esi sivumelwano sisebenza njani kwaye iFortnite iya kusebenza ixesha elingakanani kwifowuni ye-Samsung. Ke, siya kuba nakho ukwazi ukuba iya kubafikelela nini abanye abasebenzisi kwi-Android.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Uku-odola kwangaphambili kweGPS 9 iza kuza ne- $ 150 yokuchitha kwi-Fortnite